Izindaba ze-Biofilm-membrane bioreactor-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Umqondo we-biofilm-membrane bioreactor
Isikhathi: 2020-04-15 Hits: 57
Eminyakeni yamuva, ubuchwepheshe bokwelashwa kwamanzi angcolile buvuthwa kancane kancane. Indlela ye-biofilm inezinzuzo zokusebenza okuzinzile, ukumelana nomthelela onamandla, ukonga ngaphezulu nokusebenza kwamandla, azikho izinkinga zokunwebeka kwe-sludge, nemisebenzi ethile ye-nitrification kanye ne-denitrification. Kusetshenziselwa kabanzi Ukwelashwa kwendle yasendlini namanzi amdaka avela ezimbonini. Emashumini eminyaka amuva nje, ama-membrane bioreactors (MBRs) athole ukunakwa okukhulu emkhakheni wezokwelapha wamanzi angcolile. Ngokuthuthukiswa kwezinto zokwenziwa kwe-membrane nobuchwepheshe be-membrane, izinkundla zabo zokufaka izicelo nazo ziyaqhubeka ukwanda. Imboni yamakhemikhali, i-elekthronikhi, imboni ekhanyayo, i-Textile, i-metallurgy, ukudla, i-petrochemical kanye nezinye izinkambu, kepha inkinga yokungcoliswa kongqimba yibhodlela eliphambili elinqabela ukusetshenziswa kwalo okubanzi. I-biofilm-membrane bioreactor iyindlela entsha yokusebenzisa amanzi ngendlela ehlanzekile (yokukhuculula indle) ehlanganisa indlela ye-biofilm kanye nobuchwepheshe bokuhlukanisa ulwelwesi. Lolu hlobo lwe-reactor lwehlisa ukukhula kwama-microorganisms amisiwe kwi-MBR ngezinga elithile. Yehlisa ukungcola kwe-membrane; ukunyakaza kwesihlungi se-reactor kungahlanze kahle ulwelwesi olungaphezulu, kunciphise ukungcoliswa kwe-membrane.
1.1 Indlela ye-Biofilm
Indlela ye-biofilm ukuphatha amanzi amdaka ngokusebenzisa i-biofilms eyenziwe ngama-microorganisms anjengebhakteriya, i-protozoa, kanye ne-metazoans enamathele ku-filler noma ophethe ukuze ikhule futhi ikhiqize. Kukhona izihlungi zebhayoloji, ama-turntables emvelo, i-oxidation yemvelo yokutholwa, imibhede egxile emanzini, njll., Esetshenziswe kabanzi ekwelapheni kwamanzi amdaka emikhakheni ehlukahlukene.
I-Membrane bioreactor ubuchwepheshe bokulashwa kwemfucumfucu obuhlanganisa ubuchwepheshe be-membrane kanye ne-activated sludge indlela. Ingagcina i-biomass ephezulu ku-reactor, ibone ukwahlukanisa isikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic kanye nesikhathi sokugcinwa kwe-sludge futhi ikhiqize i-sludge encane, ukusebenza kahle kokulashwa okuphezulu, ikhwalithi yamanzi esebenza kahle, imishini ehlanganisiwe kanye nokuma okuncane kwenyawo. Njengamanje, ucwaningo nge-membrane bioreactor luvuthiwe impela, futhi lusetshenziswe kabanzi ekwelapheni kwamanzi amdaka emikhakheni ehlukahlukene.
1.3 I-biofilm-membrane bioreactor
I-Biofilm-membrane bioreactor (BMBR) uhlobo olusha lwenqubo yokwelapha amanzi angcolile ehlanganisa ukuhlukaniswa kwe-membrane nobuchwepheshe be-biofilm, futhi kungubuchwepheshe obuqhamukayo obukwazi ukulawula ukungcoliswa futhi babone ukuvuselelwa kwamanzi amdaka. Ukususwa kokungcola kwale nqubo yobuchwepheshe kuxhomeke kakhulu kuma-microorganisms akhula kwisithwali, futhi umphumela wokwehlukanisa ubonakala ikakhulu emiphumeleni yokucwilisa ulwelwesi kanye nolwelwesi lwekhekhe lokuhlunga olwenziwe kulolwelwesi. Ukuwohloka kokungcoliswa kwendalo emanzini amdaka kuhlanganiswa ikakhulukazi izingxenye ezintathu: eyodwa kungukuchithwa kwe-biofilm enamathiselwe enkampini kanye nenani elincane lezinto zokugcwala; okwesibili kungukucekelwa phansi kwezinto eziphilayo ngama-microorganisms amisiwe ku-bioreactor; okwesithathu ukusetshenziswa kwe-membrane Umphumela wokuhlukanisa ama-macromolecule e-organic wenza ama-macromolecule e-organic athintane nama-microorganisms isikhathi eside futhi angonakaliswa futhi asuswe ngempumelelo. Njengamanje, iBMBR isisesigabeni sokucwaninga kokuhlola, futhi ayikho imibiko eminingi kulokhu ekhaya nakwamanye amazwe.
Okwedlule: Ukusetshenziswa kwe-membrane bioreactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela
Okulandelayo: Izici ze-MBR